Huawei Y6p Phantom Purple (4GB/64GB) ~ ICT.com.mm
HomeHuawei Y6p Phantom Purple (4GB/64GB)
Huawei Y6p Phantom Purple (4GB/64GB)
Size: 6.3 inches Color: 16.7 million colors Type: TFT LCD (IPS) CPU: Octa-core Processor(4 x Cortex-A53 2.0 GHz +4x Cortex-A53 1.5 GHz) System: EMUI 10.1 (Based on Android 10) Memory:... [Learn more]
CPU: Octa-core Processor(4 x Cortex-A53 2.0 GHz +4x Cortex-A53 1.5 GHz)
Battery: 4900 mAh (rated value), 5000 mAh (typical value)
Huawei Y6P က စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်ပြီး ဈေးနှုန်းသက်သာတဲ့ Huawei ရဲ့ ဘတ်ဂျက်အဆင့် စမတ်ဖုန်း ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်နှာပြင်အလယ်တည့်တည့်မှာ Selfie ကင်မရာ Notch အသေးလေးပဲ ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး မျက်နှာပြင်အပြည့်ဒီဇိုင်း၊ တောက်ပတဲ့ပလတ်စတစ်ကိုယ်ထည်နဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ အတွင်းမှန်မျက်နှာပြင်အဖြစ် IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors အမျိုးအစားကို တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားအဖြစ် 6.3” နဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပြီး Resolution အားဖြင့် 720x1600 pixels (278 ppi density) ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ OS အတွက် Android 10 ကို ထည့်သွင်းပေးထားပြီး User Interface အတွက် EMUI 10.1 နဲ့ အသုံးပြုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Google Play Services တော့ ရရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ System ပိုင်းမှာ Chipset အဖြစ် Mediatek MT6762R Helio P22 (12 nm) နဲ့အတူ CPU အဖြစ် 2.0GHz Octa-core Processor , GPU အဖြစ် PowerVR GE8320 ကို တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ Internal Storage – 64GB ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး သီးသန့် SD ကတ် ထပ်မံထည့်သွင်းနိုင်တဲ့အတွက် Storage စိတ်ကြိုက်တိုးမြှင့်နိုင်မှာပါ။ RAM 4GB ဖြစ်တဲ့အတွက် မိမိအသုံးပြုနေကြ Apps တွေအားလုံးကို တပြိုင်နက်အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ နောက်ကျောကင်မရာစနစ်အတွက် 13MP (wide), 5MP (ultrawide) နဲ့ 2MP (depth) စုစုပေါင်း ကင်မရာသုံးလုံးကို တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ မြင်ကွင်းကျယ်ပုံရိပ်တွေကို ရိုက်ကူးနိုင်မှာဖြစ်ပြီး HDR နဲ့ Panorama တို့ကိုလည်း ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။ ကြည်လင်လှပတဲ့ Selfie ပုံရိပ်တွေရိုက်ကူးဖို့အတွက် 8MP (wide) Selfie ကင်မရာကို တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ လုံခြုံရေးအတွက် Finger Print ကို နောက်ကျောဘက်မှာ ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ ဘတ္ထရီအတွက် 5000 mAh ဘတ္ထရီအမျိုးအစားကို တပ်ဆင်ပေးထားတာကြောင့် ဘတ္ထရီအားခံတဲ့စမတ်ဖုန်းအမျိုးအစားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ microUSB 2.0 နဲ့ အားပြန်သွင်းပေးရမှာဖြစ်ပြီး USB OTG ကိုလည်း ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။ အရောင်ကွဲအနေနဲ့ Phantom Purple, Emerald Green, Midnight Black တို့ဖြင့် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။ အာမခံသက်တမ်း တစ်နှစ် ပါဝင်ပါတယ်။
6.3 "Dewdrop Display
The 6.3 "Dewdrop Display4and 88.4% wide screen offers5immersive and immersive visual experiences, withanarrower and narrower front-facing camera with onlya2.65mm front-facing camera.
With its sophisticated craftsmanship and excellent coating, the back surface is beautifully polished on every angle with stunning lines.
A large 5000 mAh battery can support day-to-day activities without charging too often.6Moreover, HUAWEI Y6p is to fill the other phones easily be used asaway to reverse charging while Android phones Data Backup for photos.
4 GB + 64 GB 8 Large Storage
Your photos, Save all videos and messages to 64GB ROM memory and 512 GB storage9. The HUAWEI EROFS super file system lets you save your favorite items.
This collage feature lets you add between two and nine photos without the aid of any third-party application. Asaresult of the Smart algorithm, it can be placed inacorresponding graph depending on the size. With just one photo, you can show your friends your beautiful foliage and scenery.
Store of the latest Apps
HUAWEI AppGallery can search, find, and use mobile applications. Huawei's official proprietary distribution platform for download. We are continuing to improve the global application ecosystem to provideasecure and diverse selection of experiences. Special offers that are exclusively available to you; Enjoy programs and activities.